नबिर्सिनुहोस् लाहुरेको योगदानलाई
20 Apr 2018 | शुक्रबार, ७ बैशाख, २०७५ | Edition : Nepal | UK | Australia | Global
काङमाङ नरेश राई
बिहीबार, २८ बैशाख, २०७४
नेपालीहरु विदेशीने परम्पराको सायद जेठो ईतिहास हुन सक्छ, लाहुरेहरुको ईतिहास । यो ईतिहास स्वईच्छाले जन्मिएको हैन, राज्य सत्ताले जन्माएको हो । यस्तो ईतिहास र घट्ना संसारमा नहुन सक्छ ।
एउटा देशको नागरिक कुनै अर्को देशको रक्षार्थ निम्ति लड्ने सायद लाहुरेहरु नै हुन् । आदिवासी जनजाती र केहि खस र छेत्रीका लक्का जवानहरुले वेलायती सेनामा सेवा गरेको २०२ बर्ष पुरा भईसक्यो । उनीहरुलाई भर्ती पठाए वापत नेपाल सरकारले रोयल्टी पाउँछ भन्ने सम्म सुनियो । तर यसको बिषयमा राज्य अनुत्तरित छ ।
हजारौ संख्याले वीरगती पाए, युद्ध भुमीमै । त्यतिकै संख्यामा हराए र विभिन्न देशहरुमा विस्थापित भए । युद्धमा हराएकाहरु धेरै जसो बर्मा, ईटाली, फिजी जस्ता देशहरुमा विस्थपित हुन पुगे । उनीहरुको संख्यालाई गणितिय हिसावमा उतार्ने हो भने झण्डै एक करोड भन्दा धेरै हुन्थे नेपाली माटोमा यति वेला ।
उनीहरु युद्वमा नमरेका र नहराएका भए उनीहरुका सन्तानहरु यतिवेला वेला देशको विभिन्न निकायहरुमा हुन्थे । कार्यपालीका, न्यायपालीका, ब्यावस्थापिका सबै ठाउँमा हुन्थे । नेता देखि मन्त्रि सम्म हुन्थे । पियनदेखि सचिव सम्म हुन्थे । स्कूलमा घण्टी वजाउने पियनदेखि प्रोफेसर र चौकीदार हुन्थे । फटाहा डन देखि बुद्धिमानहरु पनि पक्कै हुन्थे ।
पहिले पुर्खाहरुलाई जब्बरजस्त भर्ती पठाईयो । पुर्वी नेपालतिर पगरी, सुब्बा र मुखिया लगाएर हुकुमको भरमा भर्ती पठाईन्थो । पश्चिम नेपालतिर मुखिया र कटुवाल लागएर भर्ती लगाईन्थ्यो ।
त्यसपछि गोर्खाभर्ती एउटा संस्कार बन्यो । अनि वेलायती सेनामा आफ्नै स्वईच्छाले भर्ती जान थाले, जवानहरु । लाहुरे रहरमा परिणत भो त्यसपछि । गोर्खा भर्ती बन्यो, आय आर्जन गर्ने राम्रो ठाउँ ।
अहिले आएर नेपालीहरुको लागि सबै भन्दा राम्रो पैसा कमाउने र सरल जीवन जीउने माध्यम बन्यो गोर्खा भर्ति । यतिवेला गोरा बराबर मासिक तलब सुविधा पाउन थालेपछि गैर आदिवासी जनजातीहरु पनि धमाधम भर्ती लाग्ने संस्कार बनिसकेको छ ।
आदिवासी लाहुरेहरु वेलायत र नेपालमा अनागारिक जस्तो भएका छन् । नेपालमा छोरो पुस्ता समानताको लडाई लडिरहेको छ भने बेलायतमा बाउ र काका पुस्ता समान पेन्सन र क्षतीपुर्तीको लडाई लडिरहेको छ, किन ? प्रश्न त उठ्छ नै राज्य सत्तासंग ।
देशकोलागि लाहुरेले दिएको योगदानको विषयमा चर्चा गरौ ।
राणा शासनको विरुद्वमा भोजपुर जील्लावाट भु.पु लाहुरेहरु नारदमुनि थुलुङ्ग, राम प्रसाद राई र जसमान राई आदीले हतियार उठाएका थिए । पल्टनमा हुँदै राणको विरुद्धमा लड्ने योजना बनाएको बताउँछन्, ९९ बर्षीय जसमान राई । वेलायतबाट ईण्डिया स्वतन्त्र भएपछि, ६ महिना लामो योजनाका साथ राणाको विरुद्धमा हतियार उठाएका थिए । भोजपुरमा प्रत्येक शनिबार हटिया लाग्ने गर्थ्यो र अहिले पनि लाग्ने गर्छ । भु.पु लाहुरेहरु कोहि साग ब्यापारी बने । कोहि अम्बक ब्यापारी, कोहि सुर्ती यापारी, कोहि सुगुरको पाठा ब्यापारी भएर हटियामा छरिएका थिए ।
जसमान राई भन्छन्, नारदमुनि थुलुङ्गको नेतृत्वमा टुडिखेलमा नाचगान देखाउँन शुरु भो । सबै भने जसो बजारका मान्छे र पुलीसहरु नाच गान हेर्नतिर लागे । धनकुटाबाट हतियार साहित आएका प्रहहरीहरु माल अड्डामा हतियार विसाएर खाना खान गएछ । त्यहि मौकामा भोजपुरको मालअड्डा हतियारहरु सहित कब्जा जमायौ । त्यो दिन थियो, २००७ साल मंसिर २४ गते शनिवार ।
त्यसपछि उनीहरुले ओखलढुङ्गा, संखुवासभा, चरीकोट, धनकुटा आदी ठाउँहरुमा राणाहरुलाई परास्त पारे । भोपुरवाट विरगंज, विराटनगर जस्ता ठाउँहरुमा किराती सेनाहरु राणा शाषण अन्त्य गर्नको लागि पठाएका थिए ।
२. शिक्षा र विकास
विकासको लागि लाहुरेहरुले देशमा महत्वपुर्ण योगदानहरु दिएका छन् । राणा शाशनको समयमा उनीहरुले गाउँहरुमा स्कूलहरुको स्थापना गरेका छन् । दोस्रो महायुद्वको समाप्तपछि १९४७ मा भारत स्वातन्त्र भयो । गोर्खाहरुको कटौति गरी राखेको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो वेलायतले । ईण्डियाका तत्कालीन प्रधानसेनापति र नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति बबर शमसेर जबरालाई पैसा छोडेको जानकारी गरायो, वेलायतले । ईण्डियाका तत्कालीन प्रधान सेनापतिले नेपालको तत्कालीन प्रधान सेनापति बबर शम्सेरलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका थिए ।
वि.स. २००५ साल कार्तिकमा प्रधान सेनापति ववर शम्सेरले भु.पु. गोर्खा अफिसरहरुलाई काठमाण्डौ वोलाएका थिए । बैठकमा ववर शम्सेरले सोधेका थिए, “यो पैसा तिमीहरुले के गर्छौ”? तीन महिना लामो छलफलपछि भु.पु. लाहुरेहरुले उक्त रकमलाई गाउँहरुमा स्कूल र स्वास्थ चौकीहरु बनाउँने निर्णय गरे ।
धेरै जिल्लाहरुमा डिस्ट्रिक सोल्जर वोर्डको स्थापना भयो । अहिले वलफेर भनिन्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक डिस्ट्रिक सोल्जर वोर्डमा एक जना कर्माचारी खटाएको थियो । वोर्डको अध्यक्ष र उपध्याक्षमा भु.पु. लाहुरेहरुलाई नियुक्ति गरेको बताउँथे स्व. दिल कर्ण राई र बुद्धि बखत राई । वैठकमा पुर्वी नेपालवाट भु.पु.क्याप्टेन कमान सिंह, सरदार वहादुर लिम्वु, चैनपुरवाट जगत वहादुर याख्खा, भोजपुर निवासी सरदारवहादुर हर्क राज राई “उनले पहिलो विश्वयुद्वमा सरदार बहादुर पदक पाएका थिए” । र सरदार बहादुर मानसेर राईको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरि नेपालको पश्चिमबाट छैठौं गोर्खा राईफलका अनररी क्याप्टेन रडक सिंह गुरुङ्ग, चारऔं गोर्खा राईफलका अनर री क्याप्टेन नर वहादुर गुरुङ्ग, (उनी पछि मन्त्री पनि भएका थिए ) लगायत भु.पु. लाहुरेहरु बैंठकमा उपस्थित थिए ।
उनीहरुले स्कूल स्थापना गर्न एक जना प्रतिनिधि तोकी ठाउँ ठाउँमा पठाएका थिए । भोजपुर जिल्ला टेम्के मैयुङ्ग गाउँपालीका वर्ड नम्बर १ तिम्मामा चहक मान राईलाई खटाएका थिए । सानो दुङ्गमामा भु.पु सुबदार जित वीर राईको उपस्थिती रहेको बताउँथे, स्वार्गिय बुद्धि बखत राई । जुन समय नेपालमा सरकारी स्कूलहरुको निर्माण भएको थिएन । त्यो वेला स्कूलहरुको स्थापना गरेका हुन लाहुरेहरुले ।
सेवारत लाहरेुहरुले बर्षमा एक दिनको तलव गोर्खा वेयलफेयर ट्रष्टलाई दिने गरेका छन् । उक्त रकमबाट वेलफेयरले स्कूल, हेल् थपोष्टहरु निर्माण गर्छ नेपालमा । खानेपानी अभाव भएका ठाउँहरुमा खानेपानी पु्याउने गरेका छन् । डि.एफ.आई.डि.को नाममा प्रत्येक बर्ष वेलायत सरकारले नेपाललाई आर्थिक अनुदान प्रदान गर्दछ । जुन अनुदान लाहुरेसंग सरोकार राख्छ ।
नेपालमा रेडियोको स्थापना भोजपुरमा भु.पु लाहुरे नारदमुनि थुलुङ्गको नेतृवमा भएको थियो । रेडियो अप्रेटरको नाम हो, कुबेरमान राई । रेडियो अपरेट गर्ने काम गरेपछि कुबेरमान राई अप्रेटरमा परिणत भएको थिए । सबैले उनलाई अप्रेटर नै भन्थे । उनको नाम नै अप्रेटर हुन पुग्यो । उनी गोर्खा सिंगनलबाट टेक्निसियनमा अवकाश भएका थिए ।
तर भोजपुरमा स्थापना गरिएको रेडियो स्टुडियोलाई विराटनगर सारिएको थियो । रेडियोमा पहिलो बोल्ने व्यक्ति नारदमुनि थुलुङ्ग थिए, तर उनको नाम गुमनाम रहेको छ ।
४. साहित्य र संगीतमा
नेपाली साहित्य, संगीत र संचार क्षेत्रमा पनि उति नै उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् लाहुरेले । नेपाली भाषामा पहिलो फोनिन् कार्यक्रम चलाउने भु.पु लाहुरे किशोर गुरुङ्ग हुन् । उनी विएफविएस गोर्खा रेडियोमा लामो समय काम गरे । हङ्गकङ्गमा फोनिन कार्यक्रम चलाउँथे । पाण्डव सुनुवार कोरियाबाट हङ्गकङ्ग पुग्दा उनले फोनिन कार्यक्रम चलाएको देखे । अनि पो त्यसपछि, नेपालमा पाण्डव सुनुवारले फोनिन कार्यक्रमको शुरुवात गरेका हुन् ।
पहिलो नेपाली गायक मास्टर मित्र सेन थापा मगर हुन् । उनले रत्नदासले भन्दा पहिले ईण्डियामा ग्रामोफोन डिक्स्मा गीत रेकर्ड गरेको ईतिहास पाईन्छ । नेपाली पप गायनको प्रवर्तक नोरदेन तेन्जिङ्ग हुन् । उनले भर्ती हुन अगावै दार्जीलीङ्गमा ब्लुस्टोन ब्याण्डमा ड्रम बजाउने र गीत पनि गाउँथे ।
लाहुरेहरु नेपाल फर्केपछि कतिले कम्पाण्डरको काम गरे । बच्चा जन्माउन नसकी कयौ छोरीचेलीहरुको अकालमा ज्यान जान्थे । गाउँघरमा धामी झाक्री भन्दा अर्को कुनै उपाय थिएन । पल्टनघरमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरुले छोरीचेली र नवजात शिशुहरुको ज्यान बचाए । उनीहले त्यो बेला पारा मेडिकको काम गरेका थिए । धरान, पोखरा आदि ठाउँहरुलाई नयाँ शहर बनाउनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएका छन् लाहुरेहरुले ।
Don't have facebook! Click Here
नयां नेतृत्व चुन्दै नेपाली साहित्य विकास परिषद बेलायत , अधिवेसन मे १३ मा
मे १३ तारिख आइतबार लण्डनको एक्टनस्थित एबिआई कलेजमा परिषदको अधिवेसन हुंदैछ । अधिवेसनबाट संस्थाको नयां नेतृत्व चयन गर्न कृष्ण भट्टको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ ।
महारानी एलिजावेथपछि युवराज चार्ल्स कमनवेल्थ प्रमुख बन्ने
कमलनवेल्थ अन्तर्गतका ५३ मुलुकहरुको यो नेटवर्कको प्रमुखमा अहिले बेलायती महारानी एलिजावेथ द्धितिया छन् । महारानी स्वयमले पनि आफ्नो यो जिम्मेवारी आफुपछि युवराज चार्ल्सलाई नै दिने ईच्छा जाहेर गरेको बताइएक
बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषद अध्यक्षमा डा. अधिकारी निर्वाचित
परिषदको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट आगामी ४ बर्षको लागि डा. अधिकारीको नेतृत्वमा तीन जना मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीहरूको निर्विरोध चयन भएको हो ।
पशुपति शर्मा र सम्झना लामिछानेले ल्याए ‘डल्ले साबुन’ (भिडियो)
धुर्मुस सुन्तलीकाे लघु चलचित्र- हरियाे बिल्ला
“के म तिम्रो होईन र”
ठूलाे मात्रामा अमेरिकी डलरसहित सुन्धारामा १ जना पक्राउ
दुई कोरियाका नेताका लागि हटलाइन सेवा सुरु
अाेली र प्रचण्डबीच दाेस्राे दिनकाे छलफल सकियाे, भाेली पनि भेटघाट हुने
२२ वर्षको आर्सनल बसाईंपछि आर्सिनी वेङ्गरले यसै सिजनको अन्त्यमा क्लब छोड्ने
उपाध्यक्ष यादवकाे नेतृत्वमा फुट्याे राष्ट्रिय जनता पार्टी
अष्ट्रेलियामा रेल दुर्घटना, ४० जनाभन्दा बढी घाइते
बारबाराको अन्त्येष्टिका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले ठूलो मात्रामा अमेरिकी डलर सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड : यात्रा सहज बन्दै, दुर्घटनाकाे जाेखिम बढ्दै
कुख्यात अपराधी मनोज पुनका सहयोगी युवा संघका मल्ल सार्वजनिक
अम्बानीकी छोरी : यति सानै उमेरमा ४ करोड भन्दा बढी कमाउँछिन्
एजेन्सी । रिलायन्स र जियोको बोर्ड मिटिङमा आफ्नो दमदार प्रस्तुती दिएकी एसियाकै धनि मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशा अम्बानी छिट्टै बलिउडमा देखिने भएकी छिन् । उनी फिल्म प्रोड्युसरको रुपमा बलिउडमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ।
कुन राशिका मानिसहरु अत्यन्त धनी ?
तपाईको शरीरमा पनि यी ५ लक्षण देखापर्छन् ? बेवास्ता नगर्नुस्
२७ वर्ष काटेपछि बुढीकन्ये !
एजेन्सी । २७ वर्षभन्दा उमेर कटेका युवतीलाई चिनीयाँ समाजमा ‘बुढी कन्या’ भनेर हैरान पार्छ । समयमै विवाह गर्नुपर्ने राय बाड्ने यहाँको समाज उमेर उकालो लाग्ने बित्तिकै छानेर छाडिएकी वा कुनै गम्भिर समस्या भएकी भन्नेसम्म शंका गर्छ ।
यस्तो एउटा होटल, जहाँ आफ्नै मृत्युको अनुभव गर्न सकिन्छ
यी हुन् विश्वकै खतरनाक अपराधिहरु जसले डरलाग्दा घटना घटाए
अजब गजबकाे रितिरिवाज: यस्ता ठाउँ जहाँ महिलालाई प्रवेश निषेध छ
© Copyright 2015 NepaliPatra . All Rights Reserved.